Global Voices teny Malagasy · Liva Andriamanantena – Jona 2017
Liva Andriamanantena · Jona, 2017
Nanomboka nandika tamin'ny 22 Marsa 2016 · 1792 Lahatsoratra
Lahatsoratra farany an'i Liva Andriamanantena tamin'ny Jona, 2017
Afrika Mainty26 Jona 2017
A number of bloggers are supporting an initiative by Iran-based blogger Mino Saberi, to defend the rights of dogs, birds, cats, and other creatures of the Earth. The mistreatment of animals is common in Iran, and bloggers are asking national television to stand up for their rights. Maro ny bilaogera...
Rakipeo NACLA-GV, Amerika Latina: Ny Dian'ny Mpifindra Monina
Amerika Latina23 Jona 2017
Miresaka momba ny fanavaozana ny fifindra-monina any Etazonia ny mpiara-miasa ato amin'ny Global Voices Robert Valencia sy ny mpanoratra ao amin'ny NACLA Joseph Nevins . Ity podcast ity dia ampahany amin'ny andian-dahatsoratra NACLA-Global Voices, Amerika Latina: Ny Dian'ny Mpifindra Monina .
Jordania: Ny Fanomboham-Piainana Vaovao Ho An'i Dwwen
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana21 Jona 2017
Tony tamin'ny fiandrasana ny fanambarana mikasika ny lahatra ho an'ny bilaogy mpanangom-baovao Arabo malaza Dwwen ny bilaogera Arabo. Nomena ny fanazavana rehetra taorian'ny fanjavozavoana kely ary raharaha toy ny mahazatra ho an'ilay tranonkala izay mamory ireo bilaogera Arabo mamoaka lahatsoratra amin'ny teny Arabo sy Anglisy eo ambany tafo iray izany.